Keypad misy bokotra LED - Patent Apple vaovao | TeraNews.net
Keypad misy bokotra LED - New Apple Patent
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 03.01.2021
Hafahafa fa tsy nieritreritra an'io ny sinoa, izay mivarotra peripheraly PC mora vidy amin'ny tontolo iray manontolo. Rehefa dinihina tokoa, mpanjifa an-tapitrisany no nividy fitendry sinoa niaraka tamin'ny hieroglyph tao amin'ny magazay an-tserasera. Ary avy eo - nanao sary sokitra tamin'ny sary fitakiana ilaina izy ireo. Ny kitendry misy bokotra LED dia patanty Apple vaovao. Mora be ny manao kianja LED namboarina an-jatony. Ary apetaho amin'ny bokotra keyboard. Ary, raha ny peripheral ho an'ny PC no resahina, dia ho an'ny solosaina finday dia vahaolana tsy azo eritreretina ho toy ny fangatahana izany.
Ny patanty dia misy mihoatra ny fanazavana ny bokotra LED. Manohana ny valiny maro, ny valin'ny tsindry ary ny valin'ny fanehoan-kevitra. Milay izany. Alao an-tsaina ny solosaina finday miaraka amin'ireo haitao rehetra ireo na ny lalao fitendry. Efa te hividy gadget toy izany aho izao, ampanjifaiko ary hankafizako ireo tombony rehetra tamin'ny taonjato faha-21.
Araka ny noforonin'ireo mpamorona ny Apple Corporation, ny lakile tsirairay avy dia ho efijery LCD kely. Mety ho OLED, ohatra. Na teknolojia mitovy amin'izany. Ny bokotra dia tsy maintsy mangarahara. Midika izany fa ny fototry ny lakile dia vera, seramika na safira.
Iza no mila fitendry miaraka amin'ny bokotra LED
Mazava fa amin'ny ampahan'ny tetibola dia mora kokoa ny mametraka sticker amin'ny lakile. Saingy eo amin'ny sehatra antonony sy premium, ny vahaolana dia hahita fampiharana ho azy.
Ny olona sembana amin'ny fahitana dia afaka mampitombo ny litera. Na ovao ny loko jiro. Raha ny fanazavana, ny toe-javatra farany dia efa ampiasaina mavitrika erak'izao tontolo izao - kitendry backlit, ohatra.
Tsy ilaina ny manao solosaina finday ho an'ny faritra sasany. Latin, Cyrillic, hieroglyphs - ny tompony ihany no mametraka ny kitendry tadiavina ho azy.
Amin'ny lalao dia azonao atao ny mifidy fanalahidy hifehezana. Hatramin'ny fotoana nametrahanao sary iray izay manondro ny fiasan'ny bokotra.
Toy izany koa no azo atao amin'ny mpamorona, mpandahatra programa ary olona miasa miaraka amin'ny atiny sary sy horonan-tsary.
Ny keypad misy bokotra LED dia dingana iray amin'ny ho avy. Raha vita tsara dia afaka mahazo valiny lehibe. Raha dinihina ny zavatra niainan'i Apple tamin'ny famokarana teknolojia solosaina dia tsy hisy lesoka mihitsy. Tsy ho ela izao tontolo izao dia hahita kitendry vaovao eny an-tsena ary hitondra azy ireo hivezivezy.
Iray ihany ny fihemorana amin'ity patanty ity. Mety iharan'ny sazy ny sinoa raha toa ka manolotra vahaolana mora vidy miaraka amin'ny bokotra LED eo amin'ny tsenany izy ireo. Izany hoe ny marika Apple ihany no hanana kitendry toy izany, ary mety ny vidiny. Hijanona ho afa-po amin'ny lalao fotsiny FANAPAHAN-KEVITRA marika Taiwaney matotra.
Refrigerator Mini-style Mini an'ny Xbox Series an'ny Microsoft
Oclean W10 Water Flosser - ny mpitsabo nify anao manokana
Imilab w12 sy w11 - famerenana famantaranandro mahafinaritra
Miezaka manaikitra ny tanany i Shina - ny politika hafahafa ao amin'ny firenena
Ny fenitra USB-C 2.1 dia manohana herinaratra famahana hatramin'ny 240W
Google Chrome tsy misy fanakanana doka - vaovao
Ny fanofana mpizara VPS no fomba mahomby amin'ny orinasa
Fitoviana amin'ny planeta Tany - fiheverana vaovao an'ny mpahay siansa
Bill Murray dia mpilalao malaza amin'ny indostrian'ny sarimihetsika manerantany
Ny boaty fahitalavitra 5 TOP avy any Shina manomboka any 50 ka 100 $ miaraka amin'ny topimaso
VONTAR Wireless Keyboard: Aforitra, Bluetooth
Izay tranga PC dia tsara kokoa ny misafidy - refy
Basy ambony: Maverick - andiany tamin'ny fikomiana 1986 tamin'ny taona